अर्थ/ब्यबशाय Archives - Samyantra
निर्माण सम्बन्धी सम्पुर्ण काम एकै ठाउँबाट गर्ने गरी स्थापना भएको राईजिङ कन्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सीको पुर्बप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक भब्य समारोहका बिच उद्घाटन गरेका छन् । सो अवसरमा पुर्बप्रधानमन्त्री डां. भट्टराईले देशका दक्ष युवाहरुले आफ्नै देशमा लगानी गरेर केही गर्ने योजना गर्नु र यसको थालनी भएकोमा खुशी ब्यक्त गरे। बहुआयामिक... पुरा पढ्नुहोस
मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका वार्ड नं ८ स्थित कृष्ण आयल पेट्रोल पम्प अगाडी नयां इट्टा उधोग सञ्चालनमा आएको छ । युवा उद्यमी भिम रसाइली , एसबी रसाइली , दिल रसाईली र भिम लामिछानेले उक्त इट्टा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन ।अरुण उपत्यका इन्टरलक इट्टा उद्योग नाम रहेको उधोगको शुक्रबार विधिवत रुपमा उद्घाटन... पुरा पढ्नुहोस
मोरङ। पश्चिमी नेपालका ब्यापारीहरुलेे पुर्वी तराइमा विभिन्न सरसामानकाे ब्यापार गरेेर राम्रो आम्दानी गर्दै अाएका छन् । बेरोजगारीको कारण देखाउंदै दिनहुुँ युवाहरू बिदेश पलायन भइरहेका बेला खासगरी पश्चिम पहाडका जिल्लाहरुबाट ब्यापारीहरु पुर्वमा आउने गरेका हुन् । कालिकोट, सुर्खेत, बझाङ, जाजरकोट लगायतका पश्चिम पहाडका विभिन्न जिल्लाहरुबाट पुर्वी तराइका जिल्लाहरुमा व्यापार गर्न आउने... पुरा पढ्नुहोस
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एक प्रतिष्ठित कम्पनीको रुपमा रहेको अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ८ मेगावाट क्षमताको अप्पर नौगडगाढ साना जलविद्युत आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले आगामी चैत १५ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । धेरै जसो जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु सुगम क्षेत्रमा मात्रै जलविद्युत्... पुरा पढ्नुहोस
मोरङको बेलबारीमा बिदेशको जस्तै अत्याधुनिक ‘मिट–मार्ट’ नामक मासु पसल खुलेको छ । उपभोक्तालाई सफा र स्वास्थ्यदायी मासु विक्री गर्ने उद्देश्य सहित उच्च प्रविधिमा आधारित ‘मिट–मार्ट’ खुलेको हो । बेलबारी ३ स्थित पश्चिम बसस्टेण्ड दक्षिणतर्फ मंसिर १ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘मिट–मार्ट’ ले धेरैको ध्यान खिचेको छ । नयाँ प्रविधी र शैलीका... पुरा पढ्नुहोस